Bogga ugu weyn Amaahda Shakhsiyeed ee Degdegga ah: Amaah bixiyayaasha ugu Fiican ee Lacag Dhakhso ah
Maadaama aanay xaaladaha degdegga ahi albaabkaaga soo garaacin ka hor inta aanay dhicin, in badan oo naga mid ah mar walba si buuxda uguma diyaargaroobin iyaga ka hor inta aanay dhicin. Tixgeli kharashyada caafimaadka, burburka baabuurka degdega ah, ama masiibada dabiiciga ah ee saameeya guriga una baahan hagaajin degdeg ah. Helitaanka deyn bixiye bixisa deymo shakhsiyeed oo degdeg ah waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh xaaladahan oo kale.
In kasta oo ay adkaan karto in la helo amaah-bixiyeyaal dhaqameed isla maalintaas la bixiyo, amaah-bixiyeyaal badan oo internetka ah ayaa bixiya deyn shaqsiyeed degdeg ah oo leh mudnaantan.
Akhri Sidoo kale: Dib u eegisyada Amaahda Shakhsi ahaaneed ee SoFi
Waxyaabaha ay tahay in la tixgeliyo marka la dooranayo deyn-bixiye
Xaalad degdeg ah, mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee la tixgeliyo marka deyn laga codsanayo deyn bixiyaha waa sida ugu dhakhsaha badan ee deyn bixiyuhu u bixiyo bixinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira arrimo kale oo la tixgeliyo, kuwaas oo sidoo kale lagama maarmaan ah.
Waxay ku jiraan muddada amaahda iyo qiimayaasha. Markaad deyn ka dalbanayso amaah-bixiyeyaasha internetka, hubi in shuruudaha deynta si cad loo sheegay oo ku habboon dakhligaaga/miisaaniyaddaada billaha ah.
Sidoo kale, hubi inaad ku raacsan tahay qiimaha ereyga ka hor intaadan sii wadin saxiixa heshiiska. Dejinta deynta gaarka ah waxay si xun u saameyn kartaa dhibcaha deyntaada. Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in la qiimeeyo waxyaabaha ku jira ka hor inta aan la dejin
hoos u bixiye.
Akhri Sidoo kale FHA Vs Amaahda Caadiga ah: Amaadee ayaa kuugu fiican?
Iyada oo aan wax dheeraad ah laga helin, hoos waxaa ah liiska bixiyeyaasha ugu fiican ee lacag caddaan ah oo degdeg ah.
LightStream-ka ugu fiican ee oggolaanshaha iyo maalgelinta amaahda ugu dhaqsaha badan
Wells Fargo—ugu fiican ee laga heli karo amaahda waaweyn
LendingPoint - isla maalintaas bixinta, maalgalinta maalinta xigta
Amaahda gantaal-ka ugu fiican kuwa leh credit credit
Soo hel deymaha gaarka ah — sida ugu fiican ee oggolaanshaha degdega ah
iyo maalinta xigta dhalmada
OppLoans-ka ugu fiican ee aan lahayn hubin credit oo fudud
OneMain Financial—Ugu Wanagsan Bixinta Degdega ah
Cusboonaysiinta - waxa ugu fiican maalgelinta isla maalintaas
Jaantuska Amaahda Shakhsiyeed-ka ugu fiican maalgalinta maalinta xigta
Avant-ka ugu fiican kuwa leh rikoorka deynta xun
#1. LightStream-ka ugu fiican ee oggolaanshaha amaahda ugu dhaqsaha badan
LightStream waxay sheeganeysaa inay ogolaan karto codsigaaga amaahda
iyo sidoo kale bixinta lacagaha la ansixiyay isla maalintaas. Marka ay timaado isla maalintaas
amaahda, LightStream waa tan ugu fiican sababaha soo socda awgood:
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Shakhsiyeed ee LightStream
Oggolaanshaha amaahda iyo maalgelintu waxay u dhaxaysaa isla maalintaas ilaa 2 maalmood oo shaqo
APR-yada hoose ee ka bilaabma ugu hooseeya 2.49% ilaa 19.99%
Shuruudaha amaahda dabacsan oo leh muddada bixinta
laga bilaabo 2 ilaa 7 sano
Qiimaha asalka eber
Eber ujrooyinka daahsan
Lacag deyn ah oo weyn oo ka bilaabma $,5000 ilaa
Dhibcaha buundada ugu yar:660
Sannado badan oo taariikh credit wanaagsan
Taariikhda lacag bixinta wanaagsan oo leh wax yar ama dib u dhac la'aan
Noocyada akoonnada kala duwan ee ku jira credit-kaaga
taariikhda sida mortgage, deynta baabuurta, kaararka deynta, iwm.
Caddeynta awoodaada inaad lacag kaydsato, taas oo
waxaa ku jiri kara kaydka hawlgabka ama noocyo kale oo kayd ah
Helitaanka dakhli ku filan oo lagu dejiyo hadda jira
deynta iyo amaahda LightStream
Muddada Helitaanka Wakhtiga Amaahda
Muddada helitaanka muddada amaahdu waa 2 sano ilaa 7 sano.
#2. Wells Fargo—Ugu Fiican Helitaanka Amaahda Waaweyn
Haddii aad raadinayso deyn bixiye sumcad leh
oo bixisa lacago badan oo amaah ah muddo gaaban gudaheed, Wells Fargo waa meesha la heli karo
u leexo. Waxa intaa dheer in si fudud loo heli karo
Lacago badan oo amaah ah, Wells Fargo kuma dalaco kharashka asalka.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Shakhsiyeed ee Wells Fargo
Oggolaanshaha amaahda iyo maalgelintu waxay u dhaxaysaa 2 ilaa 4 maalmood oo shaqo
APR-yada waxay u dhexeeyaan 5.9% ilaa 19.99%
Dhibcaha credit ugu yar ee 660 waa lama huraan marka aad codsanayso deymaha gaarka ah ee Wells Fargo
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Amaahda Doc Aan Jirin? Wax kasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Lacag deyn ah oo weyn oo ka bilaabma $3,000 ilaa $100,000
Muddada la heli karo ee muddada amaahdu waxay ka bilaabataa 1 sano ilaa 4 sano
#3. LendingPoint—Dinitaanka Isla Maalin ah, Maalgelinta Maalinta xigta
Marka loo eego LendingPoint, codsashada deyn shakhsi ah oo keliya
waxay qaadanaysaa dhowr daqiiqo, halka go'aanka codsigaaga lagu samayn karo gudaha
ilbiriqsi Marka codsigaaga la ansixiyo, lacagaha waxaa la bixin karaa ganacsiga soo socda
maalin. Caadiyan, wakhtiga maalgelinta ee amaahda LendingPoint waa 24 saacadood gudahood. Kuwa leh buundooyinka buundooyinka credit-ka hooseeya, LendingPoint waxay noqon kartaa doorashada ugu fiican.
Dib u eegida Amaahda Shakhsi ahaaneed ee PNCs
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Shaqsiga ee LendingPoint
LendingPoint waxay bixisaa ogolaansho isla maalinta ah ee codsiga.
Si kastaba ha ahaatee, lacaguhu waxay caadi ahaan yimaadaan maalinta xigta (24 saacadood gudahood).
APR waxay ku kala duwanaan kartaa $9.99 ilaa $35.99
Dhibcaha credit ugu yar ee 580 waa lama huraan si aad ugu qalanto amaah
Saamiga deynta-ilaa- dakhliga ee ka yar 50% laga jaray amaahda amaahda sidoo kale waa lama huraan
Kharashka asalka u dhexeeya 0% ilaa 6% sidoo kale waa shuruud
Qadarka la heli karo wuxuu u dhexeeyaa $2,000 ilaa $36,500
Lacag-bixinta daahda waxay soo jiidataa ujro daahsan oo ah $30. Si kastaba ha ahaatee, LendingPoint waxay ogolaan doontaa muddada nimcada ee 15 maalmood
Muddada helitaanka muddada amaahdu waa 2 ilaa 4 sano.
#4. Amaahda Gantaalka-ugu Fiican Kuwa haysta Dhibcaha Dhibcaha Caddaaladda ah
Kuwa leh buundooyinka credit credit, Rocket Loans ayaa ku siinaya
oo leh fursad weyn oo lagu heli karo deymo shaqsiyeed degdeg ah. Sida laga soo xigtay Rocket
Amaahda, oggolaanshaha amaahda waxaa badanaa lagu sameeyaa 5 daqiiqo gudahood.
Amaahiyeyaasha buuxiya habsocodka codsigooda ka hor 1 galabnimo maalinta ganacsiga waxay heli karaan lacagtooda isla maalintaas. Amaahiyeyaasha raba inay ku daraan la- saxeexe bixinta dammaanadda codsigooda waxay ku samayn karaan amaahda Rocket.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Gantaalka Amaahda Shakhsi ahaaneed
Oggolaanshaha amaahda iyo bixinta maalgelinta badanaa waa isku maalin gudahood ilaa 4 maalmood oo shaqo
APR-yada waxay u dhexeeyaan 7.16% ilaa 29.99%
Dhibcaha ugu yar ee 640 ayaa lagama maarmaan u ah dhammaan codsadayaasha amaahda
Qadarka deynta la heli karo inta badan waa $2,000 ilaa $45,000
Kharashka asalka ahi waa 1% ilaa 6% ee lacagta daynta
Amaahda Gantaalka waxay ogolaataa muddo 3 sano ilaa 5 sano ah dib u bixinta amaahda
#5. Soo ogow Amaahda Shaqsiyeedka-ugu Fiican Oggolaanshaha Degdegga ah ee Codsiga
Soo ogow sheegashooyinka codsadaha soo buuxiya dukumeentigiisa oo soo gudbiya isla maalintaas in la ansixin doono codsigooda isla maalintaas oo lacag loo bixin doono maalinta shaqada ee xigta.
Amaah bixiyayaasha leh deymaha xoojinta deynta waxay heli karaan lacag-bixin toos ah Deymaha Shakhsi ahaaneed ee Discover. Waxay sidoo kale siiyaan macaamiishooda shuruudo lacag celin dabacsan. Amaahiyeyaasha sidoo kale waxay ka faa'iidaysan karaan abka mobaylka si loo maareeyo maalgelinta wanaagsan.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato deymaha gaarka ah
Isla maalintaas codsiga amaahda iyo bixinta lacagaha maalinta xigta
Dhibcaha credit ugu yar ee 720 waa lama huraan si loogu qalmo amaahda
APR-yada waxay u dhexeeyaan 5.99% ilaa 24.99%
Codsaduhu waa inuu ahaado muwaadin Maraykan ah ama degane rasmi ah si uu ugu qalmo
Codsaduhu waa inuu ahaado ugu yaraan 18 sano wakhtiga codsiga amaahda
Ugu yaraan $40,000 oo dakhliga qoyska ah sidoo kale waa shuruud si loogu qalmo amaah shaqsiyeed
Qadarka deynta la heli karo waxay u dhaxaysaa $2,500 ilaa $35,000
Khidmad soo daahday oo ah $39
Marcus waxaa qoray Goldman Sachs Amaahda Shakhsi ahaaneed
Muddada la heli karo ee muddada amaahda inta badan waa 3 ilaa 7 sano
#6. OppLoans—Ugu Fiican Eeg Lacag La'aan Ah Iyo Habka Codsiga Fudud
OppLoans waxay qaataan hab wax yar ka duwan deymaha gaarka ah, taas oo ka dhigaysa mid aad uga fudud kuwa kale. Habka codsiga OppLoans uma baahna jeeg credit, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon xitaa kuwa leh buundooyinka credit credit. Si kastaba ha ahaatee, amaahdu waxay ku iman kartaa heer aad qaali u ah. Si kastaba ha ahaatee, bixinta amaahda isla maalintaas ayaa sidoo kale suurtogal ah OppLoans.
XIDHIIDHKA: Dib u eegida Amaahda Shakhsi ahaaneed ee Avant: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato OppLoans
Oggolaanshaha codsiga iyo bixinta lacagaha waxay qaadan kartaa 1 ilaa 3 maalmood oo shaqo
APR-yada waxay u dhexeeyaan 59% ilaa 160%
Dhibcaha ugu yar ee credit looma baahna si loogu qalmo amaah
Daynta la heli karo waxay u dhaxaysaa $500 ilaa $4,000
OppLoans ma dalacayaan lacag asal ah
Muddada amaahdu waxay diyaar u tahay ilaa 18 bilood
#7. OneMain Financial—ugu Fiican Lacag Bixinta Degdegga ah
Marka loo eego OneMain Financial, dayn-qaadayaasha dhammaystiray iyo
soo gudbiyaan foomkooda goor hore oo ku filan waxay xaq u yeelan doonaan inay helaan lacagtooda isla si la mid ah
maalin. Codsadayaasha OneMain Financial waa inay sidaas ku sameeyaan onlayn oo ay booqdaan
xafiiska inta lagu jiro maalinta si ay u helaan qaddarka deyntooda iyada oo jeeg ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa inaad si toos ah lacag ugu hesho akoonkaaga, taasoo qaadan karta ilaa laba
maalmo in la yimaado. Haddii buundada credit-kaagu hoos uga dhacdo kuwa wanaagsan, tixgeli OneMain
Maaliyaddu waa bartaada bilawga ah markaad codsanayso deyn.
10-ka Amaah ee Ardayda Qalinjabinta ugu Fiican 2021
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Maaliyadeed ee OneMain
Oggolaanshaha iyo bixinta lacagaha inta badan waa
hal maalin gudaheed oo jeeg ah waxayna qaadan kartaa ilaa 2 maalmood xawaaladaha lacagta caddaanka ah
APR-yada waxay u dhexeeyaan 18.00% ilaa 35.99%
• Dhibcaha buundooyinka ugu yar looma baahna si ay xaq ugu yeeshaan
Awood u leh in uu maalgeliyo lacag-bixinta tooska ah ee deyn-bixiyeyaasha
deymaha xoojinta deynta
Qadarka amaahda la heli karo waxay u dhaxaysaa $1,500 ilaa $20,000
Kharashyada asalka ah ee $25 ilaa $400 (ama 1 ilaa 10%)
Ugu yaraan 2 sano, ugu badnaan 5 sano.
#8. Dib u cusboonaysii - Waxa ugu Fiican Maalgelinta Isla Maalintaas
Dadka aan lahayn SSN, cusboonaysiinta ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican marka ay jirto
u yimaadda helitaanka deyn shakhsiyeed oo degdeg ah. Casriyeyntu waxay u oggolaanaysaa amaah-qaadayaashu inay ku dalbadaan
baasaboorkooda halkii ay ka ahaan lahaayeen SSN. Codsiga wuxuu u furan yahay muwaadiniinta Mareykanka iyo
deganayaasha rasmiga ah. Codsiga deynta sidoo kale waa u furan yahay dadka saaran
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato cusboonaysiinta amaahda shakhsi ahaaneed
Oggolaanshaha iyo maalgelinta waxay qaadan kartaa ugu yaraan 2 maalmood
iyo ilaa 6 maalmood oo shaqo
APR-yada waxay u dhexeeyaan 5.94% ilaa 35.47%
• Dhibcaha ugu yar ee buundada 560 ayaa lama huraan u ah
u qalmo codsiga
Qadarka amaahda la heli karo waxay ka bilaabataa $1,000 ilaa
Amaahiyeyaasha waa in ay bixiyaan kharashka asalka ah
2.9% in 8%
Muddada amaahdu inta badan waa 3 sano ilaa 5 sano.
#9. Jaantuska Amaahda Shakhsiyeed-Ugu Fiican Maalgelinta Maalinta Soo socota
Sawirka deynta shakhsi ahaaneed waxaa loogu talagalay dadka leh buundooyinka credit credit wanaagsan. Deymaha Shakhsi ahaaneed ee Jaantuska, nidaamka codsiga waa la habeeyey si loogu suurtageliyo macaamiisha inay dhammaystiraan nidaamka oo ay helaan oggolaansho isla maalintaas.
Foomamka la ansixiyay inta badan waxaa lagu bixiyaa laba maalmood oo shaqo gudahood. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo suurtogal ah in la helo lacag isla maalinta ama maalinta xigta. Dhammaan waxay ku xiran tahay arrimaha sida nooca iyo ujeedada lacagaha.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato shaxanka Amaahda Shakhsi ahaaneed
Ogolaanshaha codsigu caadi ahaan waa 1 maalin gudaheed. Si kastaba ha ahaatee,
waxay qaadan kartaa ilaa laba maalmood oo shaqo in lacagta la bixiyo
XIDHIIDHKA: Sida Loo Codsado Cafiska Amaahda PPP
APR-yada waxay u dhexeeyaan 5.75% ilaa 22.94%
Dhibcaha credit ugu yar ee 680 waa lama huraan
Qadarka amaahda la heli karo waa inta u dhaxaysa $5,000 ilaa $50,000
Deji lacag bixin toos ah oo ku raaxayso qiimo dhimis boqolkiiba 0.25 ah
App-ka mobaylka waxa uu diyaar u yahay maaraynta daynta ee wanaagsan
Deynta-ilaa- dakhliga boqolkiiba 60 ama ka yar (laga jaray kharashyada guriga)
Celceliska amaahaha ee 39%, oo ay ku jirto deynta jaantusku waa lama huraan
Ugu yaraan $1,000 oo dakhli ah ayaa lama huraan ah ka dib marka amaahiyuhu saxiixo heshiiska amaahda
Codsaduhu waa inuu ahaado muwaadin Maraykan ah oo haysta kaarka aqoonsiga ee dawladdu ansixisay oo ansax ah
Codsaduhu waa inuu ahaado ugu yaraan 18 jir wakhtiga codsiga
Lacagta asalka ah ee 0% ilaa 3% ayaa loo baahan yahay
Muddada amaahdu inta badan waa 3 ilaa 5 sano.
#10. Avant-Ugu Fiican Kuwa leh Diiwaanka Deynta Xun
Dhibcaha credit credit waxay noqon kartaa xaddid codsigaaga amaahda. Si kastaba ha noqotee, Avant waxay ballan qaadaysaa inay u fududayso kuwa leh buundooyinka buundooyinka credit-ka inay awoodaan inay helaan amaah. Waxa kaliya ee lagaa rabaa inaad hesho dhibco kredit ah oo ah 600 si aad ugu qalanto amaah Amaahda gaarka ah ee Avant sidoo kale waxay ku yimaadaan dulsaar macquul ah.
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato Amaahda Shakhsiyeed ee Degdegga ah ee Avant
Oggolaanshaha iyo wakhtiga maalgelinta ee deymaha Avant badanaa waa inta u dhaxaysa 2 ilaa 3 maalmood oo shaqo
APR waxay u dhaxaysaa 9.95% ilaa 35.99%
Codsadayaashu waxay u baahan yihiin dhibcaha ugu yar ee 600 si ay ugu qalmaan amaah
Qadarka amaahda la heli karo ee $2,000 ilaa $35,000
Avant wuxuu leeyahay khidmad asal ah ilaa 4.75%
Muddada bixinta deynta Avant waxay u dhexeysaa 2 sano ilaa 5
Dib u eegis cusboonaysiinta amaahda 2022: Sida ay u shaqeyso | Legit Ama Scam
Waa maxay Amaahda Shaqsiyeed ee ugu Fudud ee Helitaanka?
Haddii aad raadinayso deynta shakhsi ahaaneed ee ugu dhaqsaha badan si aad u hesho
la ansixiyay, OppLoans waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican. Shirkadu ma tixgeliso dhibcahaaga ugu yar ama xitaa taariikhda deynta si ay kuugu qalanto amaah.
Dhammaan waxa loo baahan yahay si loogu qalmo deyntan waa dakhli joogto ah, dhalasho Maraykan ah, ama a
deganaansho rasmi ah waana inaad ahaataa ugu yaraan 18 sano. Lambarka Bulshada
Lambarka (SSN) sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka codsigaaga.
Amaahda shakhsi ahaaneed ayaa had iyo jeer ahaa habka ugu dambeeya marka xaalad degdeg ah
shaqo joojin iyo dhaqaale ahaan waa naafo. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in
ku dadaal in aad dib u bixiso deyntaada wakhtiga ay tahay si aad uga fogaato saameyn taban
Inta badan, dhibcaha dayntaadu waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah shuruudaha amaah-bixiyeyaashu isticmaalaan si ay u qiimeeyaan oo ay u ansixiyaan codsiyadaada deynta. Maanta, iyadoo ay jiraan amaah-bixiyeyaal badan oo khadka ah, way fududahay in codsigaaga la oggolaado oo lacag la bixiyo isla maalintaas.
Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la hubiyo inaad ka gudubto shuruudaha iyo shuruudaha shirkad kasta oo aad doorato inaad ka codsato si loo hubiyo inay ku habboon yihiin.
Amaahda ugu Fiican isla-maalin isku mid ah: Waxaa laga soo celiyay Wallethub:
Amaahda Shaqsiyeed ee Degdegta ah: Amaah bixiyayaasha ugu Wanaagsan ee Lacag Dhakhso ah
4 deymaha degdega ah ee ugu fiican ee lacag caddaan ah oo degdeg ah 2021. Laga soo celiyay Credit Karma:
Amaahda Shaqsiyeed ee ugu Fiican oo leh Cosigner 2022
Sida Loo Codsado Cafiska Amaahda PPP
Amaahda gaarka ah ee American Express | Faallooyin
Immisa Ayuu Sameeyaa Amaahda Amaahda?
Soosaarayaasha amaahda amaahda, sidoo kale loo yaqaan saraakiisha amaahda, ayaa mas'uul ka ah go'aaminta in la bixiyo iyo in kale
Ma isku dayeysaa inaad dib u bixiso deyntaada ka dib markaad ka qalin jabiso dugsiga? Ama raadinta shirkad ku caawisa…
Jason waa lacag caddaan ah wuxuuna u baahan yahay deyn degdeg ah si uu u badbaadiyo gurigiisa, sidaa darteed wuxuu aaday…